Madaxweynaha Somaliland oo cadeeyay mowqifkiisa khilaafka Soomaaliya & Kenya - Awdinle Online
Madaxweynaha Somaliland oo cadeeyay mowqifkiisa khilaafka Soomaaliya & Kenya
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo dib ugu soo laabtay Hargeysa, kadib safar uu ku tegay Nairobi ayaa sheegay in guul ay ku dhamaadeen kulamadii uu la qaatay Madaweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta.
Muuse Biixi waxaa uu sheegay in Kenya ay la tageen heshiisyo waaweyn o ay la galeen oo ay kamid ahaayeen, Ganacsiga, Waxbarashada iyo Arrimo kale oo ku saabsan Amniga Gobolka.
Dhinaca kale Madaxweynaha Soomaaliland ayaa cadeeyay mowqifkiisa ku aadan Go’aanka ay dowladda Soomaaliya ay xiriirka ugu jartay Kenya, waxaana uu sheegay in go’aankaas uu albab walba u furayo soomaaliland.
“ Horta go’aankaan ay la yimaadeen soomaaliya ee ah in dowlad walba aan u tagno inay xiriirka u jaraan albaab wanaagsan ayay koo fureen oo aan aqoosni ku heleyo, anagana cid walba waan la shireynaa ayuu yiri” Muuse Biixi.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo ka carooday tallaabo u qaaday Safiirka Turkiga ee Muqdisho
Next articleRooble oo markale sheegay in gacanta lagu soo dhigayo dadkii ka dambeeyay dilka Saraakiisha